Mamorona paleta loko tsara indrindra amin'ireto fitaovana tranonkala dimy ireto | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, Palety miloko
Isaky ny mahita isika fitaovana tranonkala tsara indrindra misy ahafahana manao asa isan-karazany ahafahantsika manavotra tena tsy mila mametraka programa lehibe kokoa amin'ny solosaintsika.
Anisan'ireo fitaovana web ho an'ny mpamorona ireo natokana ho an'ny famolavolana paleta miloko izay mamela antsika hamely ny fanalahidy mety amin'ny lokon'ny menio samihafa, sary masina sy singa hafa afaka mamorona tranokala. Ireto misy dimy izay azo antoka fa ho mora aminao.
4 Blender loko
Ity fitaovana web ity dia mamela anao hamorona paleta anao manokana mifototra amin'ny loko voafantina rehetra. Ny interface dia manana famaranana lehibe ary intuitive raha mampiasa loko monochrome na mifanila aminy.
Ny safidy iray hafa dia ny fahefana misafidy loko isan-karazany ary araraoty ny safidin'ilay tranokala Paletton izay omeny.
Ity fitaovana ity dia miavaka amin'ny taranaka palety amin'ilay sary nakarinao. Esory ny sary palety voalohany misy loko dimy. Anisan'ireo tombony ananany ny fahitanay zavatra tsara tany am-boalohany, ary ny fahaizana maka sary miaraka amin'ny finday avo lenta alefanao amin'ny alàlan'ny mailaka ary ho an'i Pictaculous hiandraikitra ny famoronana paleta. Na dia amin'ireo antsipiriany mety niavian'izany aza dia ireo kaody hexadecimal.
Ankehitriny, raha ny zavatra tadiavintsika amin'ny fitaovana manentana antsika a repertoire mahafinaritra ny palety nozaraina avy amin'ny mpamorona hafa izay tia an'ity karazana atiny ity. Amin'ny fikarohana nomen'i Pitts dia azonao atao ny manasokajy ireo palety amin'ny alàlan'ny vaovao indrindra na be mpitia indrindra, mba hahitanao hoe iza amin'ireo no be mpampiasa indrindra ary iza amin'ireo no omen'ny mpampiasa hafa.
Raha mitady hamorona a teti-doko mifameno, azo antoka fa Color Blender no mety amin'izany. Miteraka paleta miloko 6 avy amin'ny loko fototra voafantina.
Manana safidy ianao manitsy ny loko tsirairay ny novokarina raha ilaina.
Ity fampiharana ity dia mamela anao hampiasa ny totozy totozy hikorisa azy manerana ny efijery mandra-pahitanao ny loko miloko tadiavina handika ny kaody hexadecimal amin'ny tsindry tokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Palety miloko » Fitaovana tranonkala 5 izay hanampy anao hisafidy paleta miloko tsara indrindra